Cishe wonke umnikazi umngane zemilenze emine izisethile umbuzo lokho kuyindlela engcono ukondla isilwane sakho, ukudla okufanele akhethwe. On ithelevishini futhi ku-inthanethi ngokugcwele abacabanga uquketheni abakhiqizi ehlukahlukene, kodwa ngamunye wethu futhi wezwa ukuthi ukudla owomile yingozi ezinganeni. Ngakho ubani okufanele sikholwa nokuthi yini ukwenza ekukhetheni okubi?
izifunzo Pros okulungiselelwe
Kunzima kakhulu ukwenza umuntu ovamile ilungelo ukudla okunempilo ngoba inja yakho. Ekhaya, kunzima, ngisho noma omaziyo kahle izidingo puppy yakho. Umkhawulo ukuthi kusesandleni sakho, kumayelana ilungelo ukubala inani imikhiqizo ukuthi kufanele zifakwe kudla kwetilwane. Kodwa lokhu ngokuvamile akwanele. ukudla Ready eyomile nomdlwana Yenziwe izinto zokusetshenziswa izilwane imvelaphi yemifino, liyanezela amaminerali namavithamini. Ngasinye ingxenye ekhethiwe eceleni imali ethile futhi okungu, ukuze ahlinzeke kanjalo isidingo umzimba ezincane amaprotheni, ama-carbohydrate, amaminerali, amavithamini kanye amafutha abalulekile.
It wagomela ukuthi nomdlwana kanye izinja ezinkulu ekudleni okuyisidina kuyalimaza. Ukuze sikhule siphilile futhi egcwele isilwane ufuna ukuthola eziningi izakhi ezahlukene. Ukudla kungokwesisu nomdlwana iqukethe ezihlukahlukene izithako ezisebenzisekayo umzimba ezikhulayo. Uma ukunikeza puppy yakho ukudla efanayo, ugweme ukucindezeleka phezu ngxenye yomzimba wakhe. Uma siqhubeka ukushintsha ukudla evamile isilwane, quadruped isimiso sokugaya ukudla bungene zingase zithinteke. Ngokwalesi simiso ukukhiqiza okuphakelayo ephelele noma for lwane.
Kanjani ukunikeza feed owomile
Kukhona imithetho ethile okufanele zilandelwe uma sondla puppy yakho ukudla eyomile. Lokhu kuyogcina isilwane sakho enempilo futhi bejabule. Kuyadingeka ukuba kancane kancane ukudla elula ukudla eyomile. Kuzothatha esingangesonto. Ngo ukudla evamile kufanele wanezela kancane ukudla okuncane eyomile imidlwane. Kancane kancane ukwandisa inani, futhi ukudla okulula kuyehla. Akunakusetshenziswa abakwazi aphonse awukudla puppy ngesimo ayi etafuleni, imbewu nokunye. Kwesisu ipheshana pup kumelwe zikwazi ukuzivumelanisa nezimo ezithile amandla nje. Uma ukondla awukudla isilwane, ngaleyo ndlela lephule isilinganiso ukudla ezivamile kanye feed.
Nokudla Okunempilo Kwabo nomdlwana ezincane zohlobo
izinja ezincane kungaba ukukuxoxela imikhiqizo yemvelo noma ukuthi liphinde ukudla ofanele eyomile imidlwane. Imboni umsoco uye okusemathinini nokudla okomile. Indlela yesibili abantu abaningi ezweni lethu abasakwazi bayangabaza. Bakwenza asetshenziselwe ize nje, ngoba izinga mikhiqizo lulwimi siphelile kuphezulu kakhulu futhi ngokuphelele kwanelisa izidingo zezilwane.
Kusese abanikazi, abaphethe ukondla ezifuywayo yini noma sizodlani ngokwabo. Lokhu kungaba nemiphumela ebuhlungu futhi zilimaza abantu inja. Kuyini kuhle kumuntu isikhathi akusebenzi umdlwane. Okungenani ukudla kunothile usawoti, ushukela kanye nezinongo ehlukahlukene kungabangela ukulahlekelwa nephunga kusukela isilwane. Umvimba Innocent ababukeka njengabantu noma ushizi engase ilethe ukuhlupheka okukhulu kamuva ngoba uhlobo encane inja. Ukudla lesifanele kuzomele sifake amaphrotheni, amafutha, carbohydrate, amavithamini, izakhi trace. Konke lokhu kunikeza ukudla umdlwane ezincane zohlobo.
I-Miniature abanikazi bezilwane ezifuywayo bangase ukhetha ukufunza "Royal Canin", "Lozalo", "Pro Hlela" nabanye.
Yini ukudla ukuzikhethela uhlobo enkulu
Ukuze zohlobo izinja ezinkulu zihlanganisa akhula ngamasentimitha angu-60 nangaphezulu, futhi zibe nesisindo esingaphezu 26 kg. ukudla Qedela lezi zilwane kumele babe izakhiwo ezithile ezokwenza ukwanelisa ngokugcwele zonke izidingo zemizimba yabo.
Ngenxa isisindo esikhulu zohlobo nomdlwana ezinkulu umthwalo enkulu inhliziyo. Ukudla kwabo kufanele ahlanganiswe B amavithamini kanye potassium. Ukuphakelwa kufanele khona ayegcwele ama-fatty acid ezifana namafutha kafishi. Lokhu kunomthelela nokuvimbela isifo senhliziyo nemithambo yegazi, kunciphisa amathuba ukukhuluphala nemiphumela yaso.
Uma inja yakho ayisebenzi, kubalulekile ukuba akwazi ukudla ukudla okunomsoco kakhulu, okuyinto akufanele ube nomdlandla nomfutho kakhulu futhi kanjani aqukethe amafutha ezilwane eziningi ezincane.
Yini ehlukanisa umzimba umdlwane izinhlobo ezinkulu
Ukuze zohlobo nomdlwana enkulu kudinga indlela ekhethekile yokudla. Basuke kukhula ngokushesha asathuthuka, abayikho, ngakolunye uhlangothi, saba nesidingo sokudla amaningi isilwane, ukudla kufanele kube ocebile calcium ne phosphorus. Nokho, ukudla okwakha ungakulimaza futhi alethe isilwane sakho ukuba unciphise umzimba futhi uhlobo amathambo akhe kanye namalunga.
Ngokuvamile, okuphakelayo zohlobo nomdlwana elikhulu wengeze imvu inkukhu, kodwa akunakusetshenziswa ungalilahli duck noma yengulube, isibonelo. Futhi esetshenziswa kancane ikhalori irayisi.
ukudla Idume izinhlobo ezinkulu
abakhiqizi abaningi ukukhiqiza ukudla zohlobo nomdlwana ezinkulu. Isenzakalo esidume kunazo zonke phakathi kwabo ezibhekwa "Hills", "Happy Dog", "Royal Canin", "Akan", "Brit," "Pro Hlela", "yarah".
Lezi acabangele umthwalo anda ngezidladla hryaschiki, ngakho okuphakelayo sengezwe glycosaminoglycans, oluqinisa izicubu zezinzwa. Futhi, ziqukethe amavithamini, amaminerali ahlukahlukene, Antioxidants. Konke lokhu lisiza ekulondolozeni impilo puppy futhi kukusiza ukuba zikhule kahle.
Yini ukudla okuhle "Royal Canin" ngoba imidlwane
Ngokuvamile dogs isisindo, ezihlobene zohlobo ezincane, ngisho lapho usukhulile ingeqi uphawu 4 kg. Lezi zihlanganisa lapdogs, ithoyizi terrier, Spitz namanye izinhlobo. Ukutadisha izinja bakwazi ukunquma ukuthi akuzona encane kuphela, kodwa futhi mancane kakhulu. Thina amakhophi amancane ikakhulukazi zonke izibonakaliso, kokubili okuhle nokubi, kungenziwa kalula iphindwe kabili.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinto izinja zohlobo encane ngisho uhamba ukuchitha umzamo okuningi, ngoba badinga ukwenza omningi izinyathelo ezisheshayo ukugcina up nomnikazi. Ngakho, inhliziyo yabo ishesha kakhulu, kanye umzimba, okusho ukuthi umnikazi ngokucophelela ikakhulukazi ukukhetha isilwane ukudla.
Esikebheni "Royal Canin" ngoba nomdlwana lezi izinhlobo - ikhalori ezinkulu. Ukuvimbela izinkinga inhliziyo yengezwe taurine kanye L-carnitine. Ukuze avuse hyperkalemia ezinganeni, inani potassium Ukudla eziqukethwe ayimbijana.
Okuphakelayo inja ivikela namazinyo kusukela plaque kanye tartar futhi kuthuthukisa wamathumbu. Lokhu kungenxa yokuthi inamaprotheni kalula digestible, kodwa kukhona uhlobo olukhethekile fibre. Konke lokhu kahle kuthinta umzimba ezincane ezikhulayo futhi kuthuthukisa kuso.
Ngenxa lemali elikhulu okuphakelayo izakhi kunikeza isikhumba impilo yakho, ivikela ezifweni noboya kwenza acwebezelayo futhi obukhulu. Lena konke sibonga khona lichaza ekwakheni ama-amino acid ezifana cystine futhi methionine, ngamavithamini A no-H, kanye-omega-3 okunamafutha acid.
Kungani "Royal Canin" kangaka uyakuthanda izinja
Futhi siphetho: "Royal" ukudla umdlwane sinikezwe ukunambitheka omuhle. Ngenxa yobukhulu encane izingcezu, okuyinto yakhelwe nomdlwana encane emhlathini, zingabantu ukudla okukhulu, ukukhuthaza ukugcwaliswa, kanye ngokufaka isamba semali efanele umsoco umzimba inja, nakuba iningi intelligibility ukudla ehlongozwayo.
Zazizokwenzenjani lezi umnikazi olukhethayo puppy yakho, into esemqoka - khumbula ukuthi idatha zohlobo zihluke eziningi zabafowabo futhi edinga ukunakekelwa okwengeziwe nokunakwa.